Ihe omuma banyere OnePlus 3 | Gam akporosis
Mgbe izu nke leaks na ụfọdụ akụkọ na-adọrọ mmasị dị ka nke ahụ atumatu nyocha Maka ndị ọrụ obodo, OnePlus 3 bụ eziokwu dị ka ọ dị na ọkwa ọkwa abalị ụnyahụ. Na ihe omume pụrụ iche ebe ejiri ndị na-ekiri VR banye ozugbo na ogbo emere maka emume ahụ n’ụzọ pụrụ iche, anyị amatalarị njirimara niile nke ekwentị a nke akpọrọ dị ka otu n’ime ‘ndị isi‘ na-egbu egbu ’yana na ọ bụ otu n’ime dị ọnụ ala karịa ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnwe ngwaọrụ nwere mgbape Snapdragon 820.
Ejiri OnePlus 3 mara a 6GB Ram, Snapdragon 820 mgbawa na ihe eji emepụta aluminom nke na-ewetara anyị ụfọdụ myirịta na ihe a hụrụ na ụfọdụ ọdụ HTC maka eriri ahụ dị n'elu na azụ. Ekwentị dị ugbu a maka ire ere na weebụsaịtị OnePlus maka € 399 na n'ụzọ dị otu a na-eweta otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị ukwuu: ọ gaghị edobe akwụkwọ ịkpọ oku dịka ọ dị na mbipụta abụọ mbụ na OnePlus na OnePlus 2.
1 A ama niile maka € 399
1.1 Nkọwa OnePlus 3
A ama niile maka € 399
Dịka m kwuru ọtụtụ oge, OnePlus bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere amaara igwu kaadị ya nke oma iru ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-enweghị oke ego na ahịa. Site n'ịbụ onye ama ama nwere ụdị nke CyanogenMod nke onwe ya, nkwupụta nke mere ka ọtụtụ ndị ọrụ nwee nnukwu nsogbu mgbe otu ndị mmepe a ghọtara nke ọma, kedu akwụkwọ ịkpọ oku iji nweta ya, ọ bịara mara ya na nooks na crannies niile nke ụwa site na ime ka ha zụta naanị iji chọpụta na ha ga-emecha zute ihe mgbochi doro anya nke chọrọ ịgafe iji nweta ya.
Bụrụ na ọ nwere ike, na OnePlus 3 ị nwere ya site na weebụ ma mgbe ịzụrụ ya, ị ga-enweta ama nke na-abịa n'ụzọ zuru ezu 5,5 inch 1080p AMOLED ihuenyo ya na Gorilla Glass 4. Ihuenyo ahụ bụ windo iji nye ọtụtụ ọdịnaya mgbasa ozi nke a ga-ahụ site na eziokwu ahụ na ọ na-arụ ọrụ ya nwere mgbawa Qualcomm Snapdragon 820 nke Adreno 530 GPU na-enye nke na-enye nnukwu ọrụ ngosi.
Otu n'ime njirimara ya kachasị mma bụ na ọ na-abịa na nnukwu nchekwa nke RAM mgbe ọ na-aga 6GB yana na ọ naghị adaba ma ọlị na ebe nchekwa dị n'ime ya nke nwere ndabara mgbe gbagoro 64GB. N'ebe a, anyị nwere ike ichefu banyere oke metụtara ntinye akwụkwọ, onyonyo na vidiyo, ebe 64 GB na-aga ogologo ụzọ. Nkọwa ndị ọzọ bụ batrị 3.000 mAh ya, ebe ọ na-akwụ ụgwọ site na USB Type-C nke nwere ike mee ngwa ngwa site na Dash Charge, o doro anya na ọ ọsọ ọsọ karịa QuickCharge.
Banyere foto anyị nwere 16 megapixel n'azụ igwefoto na ngwa anya na electronic image stabilization. Igwefoto nwere ike ịdekọ vidiyo 4K na vidiyo na-adịghị nwayọ na 720p na 120 fps. Ndị selfies na-ewere akụkụ dị mma na igwefoto 8 MP dị na ihu. Oge a ọ gụnyere usoro atụmatụ maka ịse foto nke ọ kpọrọ "Smart Capture." Ndị a bụ ọnọdụ HD, Auto HDR, na Dynamic De-Noise. Nke ikpeazụ a bụ ọrụ were ọtụtụ okpokolo agba ma jikọta ha ọnụ iji mepụta nhazi nke gụnyere iwepu mkpọtụ.
Nkọwa OnePlus 3
Qualcomm Snapdragon 820 mgbawa
Nchekwa 6 GB Ram
64 GB n'ime nchekwa na-enweghị nhọrọ kaadị microSD
5,5-anụ ọhịa 1080p "Optic AMOLED" ngosi
16 MP f / 2.0 azụ igwefoto
8MP f / 2.0 igwefoto n'ihu
Batrị 3.000 mAh nwere Dash Charge
Gam akporo 6.0 oxygen OS
Neti: Dual-SIM, GSM, HSPA +, LTE
Akụkụ: 152,7 x 74,7 x 7,35 mm
Arọ: gram 158
Onye OnePlus 3 dị ugbu a si na weebụ n'ihi na a ọnụahịa nke 399 euro ke gold na graphite agba. Ekwentị na-adọta mmasị dị ukwuu maka ọnụahịa ya na nkọwapụta ya na nke ahụ, ya mere, nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ ịzụta, yana karịa ma ọ bụrụ na anyị achọghị iji akwụkwọ ịkpọ oku nweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 3 dị ugbu a maka onye ọ bụla